विर्सने रोग : एक जटिलता | सुदुरपश्चिम खबर
– विर्सने (हालसाल तथा ४८ घण्टा भित्र गरेको काम तत्काल विर्सने)
– सोच्ने क्षमतामा कमी आउने
– व्यवहारमा परिवर्तन
– बोल्न तथा निल्नमा कठिनाई हुने
– उदासीपना बढ्ने
– र, यो समस्या बढ्दै गएमा व्यक्तिले वरिपरिको मान्छे समेत चिन्न छाड्ने ।
प्रारम्भिक चरण – प्रारम्भिक चरणमा रोगीको साथी , परिवार लगायतका अन्य व्यक्तिहरुलाई यो समस्या महसुस हुन सक्छ । यद्यपी, यो रोग लागेका मानिसहरु सजिलै ड्राइभ तथा अन्य कार्य गर्न सक्दछ । यसका बाबजुद पनि रोगीलाई कुनै कुरा स्मरण गर्न समस्या हुनसक्छ । र, आफूले जानेको शब्द वा आफूले प्रयोग गर्ने वस्तु कहाँ राख्ने गरेको छ भनेर विर्सने, नाम समस्या हुने, पढेको कुरा विर्सने, कुनै योजना बनाउनमा असमर्थ हुने गर्दछ ।
मध्यम चरण – अल्जाइमर रो मध्यम चरणमा रहेमा यो रोग वर्षौसम्म रहिरहन सक्छ । जति जति रोग बढ्दै जान्छ, व्यक्तिलाई उति नै धेरै हेरचाहको आवश्यकता पर्न सक्छ । किनकी अल्जाइमरबाट ग्रसित व्यक्ति प्राय शब्दलाई लिएर दुविधामा पर्ने गर्छ, र अचम्मको व्यवहार गर्न थाल्छ ।
अन्तिम चरण – यस चरणमा व्यक्ति वरिपरिको वातावरण प्रति प्रतिक्रिया जनाउन, वरिपरिका मानिससित बोलचाल गर्न तथा आफ्नो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न असर्मथ हुने गर्छ । परिणामस्वरुप, उनीहरुको स्मरणशक्ति जति जति कम हुँदै जान्छ, व्यक्तिमा परिवर्तन देखिन थाल्छ ।
अल्जाइमर रोगबाट बच्ने निश्चित उपाय छैन । वैज्ञानिकहरु अझै पनि यसको अनुसन्धानमा जुटेका छन् । यद्यपि मुटु रोगको जोखिम, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण, मोटापना नियन्त्रण तथा मधुमेहलाई नियन्त्रण गरेर पनि अल्जाइमरको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, युवा अवस्था देखि नै नियमित व्यायाम गरेर पनि अल्जाइमरको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
उच्च रक्तचाप छ ? त्यसो भए यसो गरौं !!